Bareefamaa hin xumuramiin:-
Qabsoo Hadhoftuu yoo dhadhaman malee Bilisummaa mi’ooftuun akka hin dhufeen Oromoo waan hubatee natii hin fakkatuu. Waan na dhibuu harki bayeen mana ta’ee bilisumma egataa hin kan amoo bilisummaaf akka qabsa’uuf malaqa barbada. Bilisummaf nami beelayee, deebootee, fincaan jaaloota isaa dhugee lubu isaa hambsee qabsa’aa jira. Kan maatii isaa beelee of isaa beelee qabsa’oon Oromoo akka ija goodhatuu caraqaa.
Ogani Oromoo Paltak Habasha irrati bayee qabsoon bilisummaa waggatiin 4O ol gegessa ture haqa qabessa akka hin taneen yeeroo nuti himan wareegami kafalamee qabsa’oon diiree irrati kufan lafe fi dhiggi isaan jaala isaanin ganamuu isaa nu argisisa. Kun amoo duranuu kufatiin qabsoo keenya essaa irraa akka madee nu hubachisaa. Waan hundafuu Uumata Cimmatuu Oggana cimmaa dhalacha, dabalee ofifuu waa hin beekneef ejjeennoo haqa fi mulataa garii uumataa isheef hin qabnee saba ijaruu hin dandeesuu. Oromoo siirti akka hin ijaramiin hidhannno siyyasa fii Oromummaa saboonumman akka of hin cimmsiin adeemsaa Ogganoota qabsoo Oromoo irra ka’uun madaluu ni danda’aama. Qabsoon Oromoo ilaalchaa waaqummsaa cimmaa irrati kan of ijaree miti. Kanaafi Leefitoon amantaa fi Leefitoon Ganda , ijarsaa wagga 40 guyya 40 keessati diiguuf danda’aan.
Namoon bayeen garuu Bilisummaa isaanfi qabsa’uuf malaqa fi badhasa adda barbaduu. Kun kan nu argisisuu hubannoo sabi keenya bilisumma fi walbumaaf qabuu heedu xiiqa ta’uu isaati. Kara birra wagoota 40 diiree qabsoo irra kan jiran fi waggoota heedu gaafi tokko malee mana hidha wayyanee kan jira nama gadisisuu. Habasha Oromoo malaqan bitee yerro of jala hirirsuu egalee kana keessa Oromooo wayee garaa isaa odeesuu bilisummaaf qoophi miti lamii isaafuu faraa. Nama garaa isaa jalatuu irra diina sii dura dhabatuu wayaa. Oromoon qabsoo dheera gegessan milka’uu dadhabban hanqinaa oogana qoofan utuu hin tanee hubanoo uumanii keenya qabuu xiiqaa ta’uu, kaka’uums fi murannoo qabsoof qabuu xiqaa ta’uu isaatiin.
Haali jiruu garaa garii utuu hin tanee garbumaa Habashati waan nu deebsa jirutuu mulachaa jira. Oromoon biyya isaa irra argi’atamee biyya Libiya keessati hidha keessa jira, biyaa Egypt keessati mana jireenya dhorkatamee sanbusa tokko fi bishan burciqoo tokko dabee kara Kayiroo irrati bayee iyyataa jira. Somalia, Yemen, Sudan fi Kenya keessati dararama jira. Kun jijiramuu kan danda’uu qabsoo haqa yoo egalee qoofa. Dargagoon Oromoo dhugman bilisummaa barbadan atataman dogogra darbee of qeequu fi of siireesuun uumataa isaan siireessan ijarani qabsoo haqa oganuu qabuu qabu.
Waxabajji 16 bara 2013